Home vato nasondrotry Tantaran'ny tantaran'ny Roman Abramovich momba ny tantaran'ny ankizy hatramin'ny taona lasa
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny Elite Football iray izay fantatra indrindra "Ny mpanakanto Rosiana". Ny tantaram-piainan'ny Roman Abramovich momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tantaram-pitiavana dia mitondra anao feno fitantarana momba ny hetsika mahavariana hatramin'ny fotoana nahaterahany hatramin'izao. Ny famakafakana dia misy ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana, ny fifandraisana misy eo amin'ny fiainana ary ny ankamaroan'ny zavatra tsy fantatra sy fantany momba ny OFF sy ny ONU.
Eny, fantatry ny rehetra ny hery mitarika azy ao amin'ny Chelsea Football Club malalany. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mahalala betsaka momba ny Abramovich Bio izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Tantaran'ny Roman Abramovich momba ny tantaran'ny ankizy -Voalohandohan'ny fiainana
Manomboka eo, ny anarana feno dia Roman Arkadyevich Abramovich. Teraka tamin'ny 24th of October 1966 tao Saratov, Rosia i Abramovich. Teraka tamin'ny rainy izy, Arkady Abramovich (biraon'ny fanjakana) ary ny reniny, Irina Michalenko (a housekeeper).
Na dia nanana fiandrianana ara-drariny aza i Abramovich raha teraka tamin'ny fiavian'ny fianakaviamben'ny fianakaviamben'ny Jiosy izy. Ny fotoan'ny fahazazany dia nahakivy taorian'ny nahafatesan'ny reniny fony izy vao 18 volana. Volana taorian'io, namoy ny rainy i Abramovich, fivoarana izay nahatonga azy kamboty talohan'ny naha-antitra 3 azy.
Ny ankizy izay niaina tamin'ny famoizana ray aman-dreny dia hahafantatra tsara ny fanaintainana lalina izay mety hiteraka. Ny vokatra ara-psikolojika dia vokatry ny fahaverezan'ny ray aman-drenin'i Abramovich. Ny vokatr'izy ireo dia nisy fiantraikany teo amin'ny fivelarany izay niaretany nandritra ny fahazazany tamin'ny fahazazany.
Soa ihany, ny dadatoany, Leib, dia nandray ny andraikiny tamin'ny fanabeazana an'i Abramovich ary nitondra azy tany Ukhta, tanàna indostrialy manan-danja ao amin'ny Repoblika Komi ao Rosia.
Tantaran'ny Roman Abramovich momba ny tantaran'ny ankizy -fanabeazana
Ny tanora Abramovich dia tahaka ny ankamaroan'ny ankizy tamin'ny taonany sy ny fahalalany, nisoratra anarana tao amin'ny sekolim-panjakana Ukhta (sary etsy ambany). Tsy toy ny namany izy, fa nanana toe-tsaina nahatonga azy hanao zavatra, izay nahatonga azy hahafantatra ny maha-zava-dehibe ny vola sy ny tombony azo avy amin'ny famonjena azy.
Noho izany, fotoana fohy talohan'ny nidirany tao amin'ny sehatry ny varotra ny fivarotana kilalao sy ny kodiarana fiara efa nampiasaina nandritra ny fampiroboroboana ny fanabeazana tao amin'ny oniversite ara-teknisiana Ukhta ary taorian'izay, dia tao amin'ny Institute of Oil and Gas tao Gubkin renivohitra.
Tantaran'ny Roman Abramovich momba ny tantaran'ny ankizy -Fanompoana miaramila
Tsy maintsy namarana ny fianarana akademika i Abramovich taorian'ny nananganana azy ho miaramila milanja ny asam-miaramila miaramila ao 1974.
Na dia niofana aza i Abramovich, dia tsy nihevitra ny karaman'ny miaramila miezaka miezaka. Izy kosa dia nanamboatra fitaovana hampiasa tsara ny raharaham-barotra ho azy amin'ny fanatanterahana ny fivarotana solika tsy manampahefana ho an'ny manampahefana.
Ny hetsika dia nahafahany nanangana sy nanangom-bola bebe kokoa ho an'ny ezaka ho avy. Izy io koa no nanamarika ny voalohany tamin'ireo tetikady tsy ara-dalàna izay hiverina amin'ny toerany.
Tantaran'ny Roman Abramovich momba ny tantaran'ny ankizy -First Company
Raha toa i Abramovich dia nieritreritra fa misy tetika tsy ara-dalàna, dia nanao izay tsara tokoa izy mba hiantohana ny orinasany voalohany, Ny Comfort Co-op (mpanamboatra plastika) dia natsangana araka ny lalàna.
Ny fahombiazan'ny orinasan-tsariny dia nahatonga azy hiditra amin'ny tanjona hafa, anisan'izany ny fanombohana ny orinasa solika voalohany ao amin'ny faritra Omsk.
Tantaran'ny Roman Abramovich momba ny tantaran'ny ankizy -Mitsangàna mba haka izany
Voalaza fa ny fahombiazana dia mitranga rehefa mihaona ny fahafaha-manao, ary ny ampahany betsaka izay nilalao tsara rehefa Mikhail Gorbachov's (Filoha teo aloha an'ny Firaisana Sovietika) dia nanokatra ny varavarana ho an'ny fisoloan-tena amin'ny 1980s. Abramite dia nanofana ny fahafahana tamin'ny alàlan'ny fandraisany ny orinasa maro ho ara-dalàna noho ny antony mahasoa.
Fotoana vitsy taty aoriana dia nahita fankasitrahana tamin'i Berezovsky izy - mpandraharaha iray manana fifandraisana akaiky amin'i filoha Rosiana teo aloha Boris Yeltsin.
Samy nanao raharaham-barotra sy politika goavana izy ireo. Ny fisakaizan'i Abramovich tamin'i Berezovsky dia nanome ny Launchpad izay nahatonga azy hiara-misakafo tamin'ireo lehilahy matanjaka, nanamafy trano iray tao amin'ny Kremlin ary nanampy azy ho amin'ny orinasa fanampiny izay avy amin'ny vokatra avy amin'ny solika ho an'ny toeram-piompiana kisoa ary na ny famerenan-dandy ataon'ny mpiambina aza. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Tantaran'ny Roman Abramovich momba ny tantaran'ny ankizy -Fiainana Fifandraisana sy fisaraham-bola sarobidy
Abramovich dia olona iray izay mahavita tombony ara-barotra avy amin'ny fifandraisany amin'ny hafa, anisan'izany ny fanambadiana. Izy no voalohany nivady tamin'i Olga. Ny fanambadiana dia nahatonga ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny orinasa mpilalao kilalao raha ny fampakarambadin'ny fampakarambadin'ny 2,000 rubles dia nampiasain'ny mpandalina Rosiana amin'ny fampivelarana ny tahiriny.
Mampalahelo fa nisara-panambadiana ny mpivady tao 1990 (telo taona taorian'ny fanambadian'izy ireo). Abramovich nanaraka ny fifandraisana teo aloha dia tsy nahomby. Niara-nihaona izy ary nanambady mpanamory fiaramanidina, Irina (sary eo ambany).
Voalohany, toa niravona nandritra ny fotoana kelikely ireo rehetra alohan'ny nisarahan'izy ireo noho ny filazana nataony tamin'ny modely Rosiana 23-taona, Dasha Zhukova. Ny fisintahana lafo vidy (sarobidy £ 155million) nahita an'i Abramovich dia namoy ny ainy noho ny zanany 5 ary nanolotra trano tany amin'ny United Kingdom niaraka tamin'ny vadiny taloha. Ankoatr'izany dia very ny renivohiny ho azy. Raha ny marina, ny fiainana dia tsy Nintendo raha tsy mahazo vintana amin'ny fotoana rehetra ny iray.
Na izany aza, toa sahala amin'ny nataon'i Oligarch ny fisaraham-panambadiana lafo vidy rehefa nifarana ny fifandraisany tamin'i Dasha Zhukova (ilay ramatoa tomponandraikitra amin'ny fiankohofana faharoa amin'ny fanambadiany) i 2017. Ny saran'ny fisarahana izay sarobidy amin'ny $ 9B dia mifanaraka amin'ny maro, lehibe indrindra any Grande-Bretagne. Ny fifandraisan'izy ireo anefa dia nitarika ny fahaterahan'ny zanakalahy iray.
Tamin'ny vanin'ity lahatsoratra ity. Tsy dia fantatra firy momba an'i Abramovich ny fifandraisana manaraka.
Tantaran'ny Roman Abramovich momba ny tantaran'ny ankizy -Political involvement
Ny fifandraisan'i Abramovich tamin'ireo lehilahy mahery tany Rosia dia tsy nahatonga ny raharaha. Ny fidiran'izy ireo ara-politika dia nibahana tamin'ny tanora mpanao fihetsiketsehana izay nanao ny fangatahana ho politika ho solotenan'ny Chukotka Autonomous Okrug, faritra iray mahantra ao amin'ny Faritra Atsinanan'i Rosia.
Nandritra ny naha-solontenany azy, Abramovich dia nitarika ny fiantohana enti-manentana mba hanamaivanana ny fahantrana ao amin'ny faritra, ny fandraisana andraikitra iray izay nahatonga ny fifidianana ho Governoran'i Chukotka tao 2000.
Na izany aza anefa dia niala tamin'ny governorany izy tamin'ny 2008 mba hifantoka amin'ny famerenana lehibe Chelsea FC tany Angletera.
Tantaran'ny Roman Abramovich momba ny tantaran'ny ankizy -Fifandraisana amin'i Putin
Abramovich no olona voalohany nanome fahazoan-dalana Vladimir Putin toy ny mpandimby ny filoha teo aloha Boris Yeltsin. Ireo roa ireo dia efa nahita fahitana iraisana tamin'ny fankafizana ny fahefana sy ny tombontsoa mifandraika amin'izany.
Efa akaiky ny duo fa i Abrama dia nanadinadina mpirotsaka ho fidiana ho an'ny kabinetra ao 1999, fivelarana iray izay nametra-panontaniana mikasika ny lanjan'ny fitarihan'i Abrahamovich amin'i Putin.
Miara- Mpitsara ambony ao amin'ny fitsarana Elizabeth Gloster dia nanapa-kevitra fa tsy dia misy fiantraikany kely eo amin'i Putin i Abramovich. Araka ny heviny;
"Tsy nisy fototra iorenan'ny fanohanana ny fifandirana izay nanamafisan'i Abramovich ny handrodana, na ny fiantraikany amin'ny hafa, ny filoha Putin, na ireo manamboninahitra ao amin'ny fitantanany, mba hampihatra ny fahefany amin'ny fomba izay ahafahan'i Abramovich hanatanteraka ny raharahany manokana tanjona. "
Tantaran'ny Roman Abramovich momba ny tantaran'ny ankizy -Chelsea Purchase
Abramovich nividy an'i Chelsea tao 2003 raha mbola governoran'ny faritanin'i Chukotka izy. Araka ny filazany, ny fividianana ny klioban-jiolahy tamin'izany fotoana izany izay tany Londres (ny tranony faharoa) dia fandosirana avy amin'ny fahasorenana, saingy maro no mino fa manana antony manosika izy noho ny fisainany miafina.
Ny fifanarahana izay natolotr'i Chelsea ho eo an-tanan'ny ologarka dia vita tao anatin'ny 15 minitra, fotoana fohy izay nanome fankasitrahana iraisampirenena Romana teo ivelan'ny lazany tany Rosia.
Mandroso haingana hatramin'ny androany, nanova azy ho anisan'ny iray amin'ireo fikambanana lehibe indrindra eran-tany ny hery mitarika ao amin'ny klioban'ny klioba. Ankoatr'izany, toa hita fa nahita marina tokoa izy fa afaka nandositra ny fahasosorana izy noho ny antony hafa nitarika azy hividy ny klioba.
FACT CHECK: Misaotra tamin'ny famakiana ny anay Roman Abramovich Tantara an-tsary momba ny tantaram-piainana malaza. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Ny tantaran'i Ashley Cole Childhood Plus untold
Ny tantaram-pitiavan'i John Terry ny tantaran'ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa
Septambra 1, 2017